Nhau - Kurongwa uye Kushanda Magadzirirwo eGesi Pressure Regulator
Inogona kuganhurwa mumhando mbiri: yepakati mhando uye yepositi mhando maererano nezvimiro zvakasiyana, inogona kugoverwa mumhando mbiri: single-stage uye mbiri-danho;
Musiyano uyu unogona kuve wakakamurwa kuita mhando mbiri: yakanaka kuita uye isina kunaka kuita. Parizvino, zvakajairika zvekumanikidza zvinodzvinyirira zvinonyanya kuve zvine imwechete-nhanho yekuita mhando uye maviri-danho remhando yakasanganiswa (danho rekutanga ndeye yakananga yekuita mhando uye yechipiri nhanho ndeye yekuita mhando).
Inogona kuve yakakamurwa kuita simbi isina kuchena 316 yekumanikidza regulator, isina simbi 304 yekumanikidza yekumanikidza, isina simbi 201 yekumanikidza regulator, yendarira kumanikidza regulator, nickel yakafukidzwa nendarira yekumanikidza regulator, nickel yakafukidzwa nendarira yekumanikidza regulator, yakakanda simbi yekumanikidza yekudzora, kabhoni simbi yekumanikidza yekudzora.
Iko kushandiswa kweanodzora yekumanikidza inofanirwa kutevedzera inotevera mitemo:
1. Chiito chinofanira kunonoka kana uchidzvinyisa humburumbira kana kuvhura chinoderedza chinodzvinyirira. Kana iyo vharuvhu yekuvhura kumhanya ichinyanya kukurumidza, tembiricha yegasi iri muchikamu chinoshanda cheiyo yekumanikidza yekudzora inowedzerwa zvakanyanya nekuda kwekumanikidza kweadiabatic, izvo zvinogona kukonzeresa zvikamu zvakagadzirwa nezvinhu zvakasikwa zvakadai sekurongedza kwerabha uye yerabha firimu ine magasketi kuti abate moto uye utsve. Iyo yekumanikidza yekudzora yakatsva zvachose. Uye zvakare, nekuda kweye static sparks inogadzirwa neiyo inokurumidza deflation uye mafuta stain yeiyo yekumanikidza yekudzora, inozokonzeresawo moto uye kupisa zvikamu zveiyo yekumanikidza yekudzora.
2.Iyo oxygen cylinder inofanira kunonoka kana ichidzvinyirira kana kuvhura iyo yekumanikidza yekugadzirisa. Kana iyo vharuvhu yekuvhura kumhanya ichinyanya kukurumidza, tembiricha yegasi iri muchikamu chinoshanda cheanomanikidza regulator inowedzerwa zvakanyanya nekuda kweadiabatic compression, izvo zvinogona kukonzeresa kuti zvikamu zvakagadzirwa nezvinhu zvakasikwa zvakadai sekurongedza kwerabha uye yerabha firimu furu gaskets kuti ubate moto uye utsve. Iyo yekumanikidza yekudzora yakatsva zvachose. Uye zvakare, nekuda kweye static sparks inogadzirwa neiyo inokurumidza deflation uye mafuta stain yeiyo yekumanikidza yekudzora, inozokonzeresawo moto uye kupisa zvikamu zveiyo yekumanikidza yekudzora.
3. Kuchenjerera usati waisa iyo yekumanikidza yekumanikidza uye kana uchivhura gasi humburumbira vharuvhu: Usati waisa yekumanikidza yekumanikidza, tora zvishoma vharuvhu yebhodhoro uye furidza ivhu kudzivirira guruva uye hunyoro kubva pakupinda mudzvinyiriri. Kana uchivhura gasi humburumbira vharafu, iyo gasi inoburitsa iyo vharuvhu haifanire kunangidzirwa kune anoshanda kana vamwe kudzivirira gasi repamusoro kubva nekukurumidza richikuvadza vanhu. Iyo yekubatana pakati penzvimbo yekubuditsa yemhepo yekumanikidza regulator uye gasi rabha pombi inofanira kusimbiswa neakavharidzirwa simbi waya kana kiramba kudzivirira njodzi yekudzingwa mushure memhepo yekupa.
4. Iyo yekumanikidza yekumanikidza inofanira kuongororwa nguva dzose, uye iyo yekumanikidza geji inofanirwa kuongororwa nguva dzose. Izvi zvinoitwa kuti uve nechokwadi chekuvimbika kwekumanikidza mutemo uye kunyatsoita kwekumanikidza gaji kuverenga. Kana iwe ukaona kuti iyo yekumanikidza yekudzora ine mweya inodonhedza kana iyo yekumanikidza gauge tsono haishande nemazvo panguva yekushandisa, inofanira kugadziriswa munguva.
5. Kutonhora kwekumanikidza kwekudzora. Kana chinodzvinyirira chinowanikwa chakaomeswa panguva yekushandisa, shandisa mvura inopisa kana chiutsi kuti unyungudise, uye usamboshandisa murazvo kana simbi tsvuku kuibika. Mushure mekuderedza kumanikidza, mvura inosara inofanira kubviswa.
6. Iyo yekumanikidza yekudzora inofanirwa kugara yakachena. Iyo yekumanikidza yekudzora haifanire kusvibiswa negirisi kana tsvina. Kana paine mafuta, inofanira kupukutwa yakachena usati washandisa.
7. Dzinodzora dzvanyiriro uye geji yekumanikidza magasi akasiyana siyana haafanire kuchinjaniswa. Semuenzaniso, kumanikidza vanodzora vanoshandisa oxygen haigone kushandiswa mune masisitimu akadai seacetylene uye petroleum gasi.